Ahịa Ahịa: Geotoko
Mgbe obula m wepụtara oge ikori ndị enyi m n’ụlọ ọrụ, m na-amụkarị ihe ọhụụ na ngwa ịtụnanya. Taa ka m na-agwa Pat Coyle okwu. Pat na-agba ọsọ nke mbụ Egwuregwu ahia gị n'ụlọnga, Coyle Media. Ọ na-akọrọ Geotoko na m - ezigbo oge dabere na ahia na nchịkọta n'elu ikpo okwu.
Ọ bụ ezigbo ngwaọrụ, jikọtara ikike ịre ahịa n'iji ya akuku anọ ra nrata, Twitter na Gowalla tinyere Ebe Facebook nọ n'ụzọ. Ugbu a na Ebe Google na-agbakwunye nbanye, m n'aka na nke ahụ bụ na mmiri dị ka nke ọma!
Lee ụfọdụ ihe sitere na saịtị Geotoko:
Mee nkwalite na ọtụtụ nyiwe ndị dabeere na ọnọdụ - Site na ọkachamara ọkachamara ngbasa ozi dị mfe nke Geotoko, ị nwere ike ịmepụta mgbasa ozi dabere na ọnọdụ maka Foursquare, Ebe Facebook & Gowalla n'ime nkeji.
Live Visiting Tracking & Okpomọkụ Map Technology - Nweta ohere dị adị ozugbo nchịkọta, nyochaa omume nnabata onye ọrụ ma jiri teknụzụ Geotoko's Heat Map kpokọta ọgụgụ isi.
Jikwaa otutu ebe n’otu ebe - Mfe bulite ma jikwaa ọtụtụ puku ebe n'otu ikpo okwu dị ike. Anyị ga-akpaghị aka dakọtara na ọnọdụ gị na ebe dị na Foursquare & Facebook Places.
Tags: ala mkpọsaala mobilegeographygeolocationgeosocialgeotargeting
Dailybọchị: inghaghachite Digital News
Feb 2, 2011 na 11:31 PM
Daalụ maka akwụkwọ akụkọ mara mma, Doug. Na ee, google ebe na-abịa n'ime ụbọchị ole na ole sochirinụ.
Feb 2, 2011 na 11:34 PM
Ị kwụ ọtọ, Pallian! Pat kwuru na unu bikwa na Vancouver. Agara m ụlọ akwụkwọ sekọndrị n'ebe ahụ tupu m alaghachi na steeti. N'ime obodo 3 m kacha elu n'ụwa!
Feb 15, 2011 n’elekere 6:13 nke abali
Ekwesịrị m ikwu na mgbe m hụchara ngosi ngosi vidiyo, ịdị mfe nke ngwa a masịrị m nke ukwuu. Ejighị m n'aka na ndị isi asọmpi ha ga-abụ mana ọ na-aghọ ikpe azụmaahịa siri ike iji chịkọta akaụntụ na-enye ihe ngwọta otu nkwụsị iji mezuo na jikwaa mkpọsa na azụmahịa. Enwere mmalite ọzọ na Boston nke m nwere ike iche maka nke a na-akpọ OffredLocal nke mara mma yiri ya. Ọ dịkwa mma ileba anya. Nlebanya dị mma, Doug.